जब यमराजले साधूलाई डाँकूको सेवा गर्न भने ...
scheduleशुक्रवार कार्तिक १ गते, २०७६
पुरानो समयमा एक डाँकु र एक प्रसिद्ध साधुको मृत्यू एकैदिन भएछ । दुवैको अन्तिम संस्कार पनि एकै घाटमा भयो । त्यसपछि उनीहरुको आत्मा यमलोक पुग्यो । यमराजले दुवैको कामको हिसाब-किताब हेरे र दुवैसँग भने, ‘तिमीहरु आ-आफ्नो कामको बारेमा केही भन्न चाहन्छौ ?’
डाँकुले विनम्रतापूर्वक भन्यो, ‘प्रभु म एक डाँकु थिएँ र जीवनभर मैले पाप गरे । तपाईं मेरो कर्मको जे फल दिनुहुन्छ, त्यो मलाई स्वीकार छ ।’
साधुले भने, ‘प्रभु, मैले आजीवन तप र ध्यान गरेँ । भगवानको भक्ति गरेँ । मैले जीवनमा कहिल्यै पनि कुनै पनि गलत काम गरेको छैन । सधैं धर्म-कर्ममा लागिरहेँ । यसकारण भगवान मलाई स्वर्ग पठाइदिनुहोस् ।’
यमराजले दुवैको कुरा सुने । उनले डाँकुलाई भने, ‘अबबाट तिमीले यी साधुको सेवा गर्नुपर्छ । यही तिम्रो लागि दण्ड हो ।’
डाँकु उक्त कामको लागि तयार भए । तर, यस्तो कुरा सुनेर साधु भने रिसाए ।
साधुले भने, ‘प्रभु, यो त पापी हो । यसको आत्मा अपवित्र छ । यसले जीवनमा कहिल्यै पनि राम्रो काम गरेको छैन । यसले मलाई छोयो भने मेरो धर्म नष्ट हुनेछ ।’
साधुको कुरा सुनेर यमराज रिसाए । उनले भने, ‘जुन व्यक्तिले जीवनभर मानिसको हत्या गरेको छ, सधैं मानिसमाथि शासन गरेको छ, उसको आत्मा अब विनम्र भइसक्यो । ऊ अब तिम्रो सेवा गर्न तयार छ । जबकि तिमीले जीवनभर भक्ति र तप गर्‍यौ तर, तिम्रो स्वभावमा अहंकार छ । मृत्यूपछि पनि तिमी विनम्र हुन सकेनौ । यसकारण तिम्रो तपस्या अधूरै छ । अब तिमी यो डाँकूको सेवा गर, यही तिम्रो सजायँ भयो ।’
शिक्षा- हामीले जीवनमा सधैं राम्रो काम गर्नुपर्छ तर, राम्रो काममाथि घमण्ड गर्नुहुँदैन । जो मानिस अहंकार गर्छ, उसको सबै राम्रा कुराहरु सकिन्छन् । व्यक्ति सधैं विनम्र रहनुपर्छ । तब मात्र उसलाई सुख मिल्छ ।
(लोकोक्तिमा आधारित कथा)
कब्जियतको उपचार कसरी गर्ने ?
मुख गन्हाउने समस्याबाट मुक्ति पाउने उपायहरु
मोटोपनबाट छुट्कारा पाउने उपायहरु
कतै यस्तो स्वभावका कारण तपाईको कलेजोमा हानी परिहेको त छैन ?
‘स्वस्थ रहन सबैले आफ्नो तौलको जानकारी लिनुपर्छ’
मधुमेहबाट आफूलाई बचाउन यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
शालिकराम प्रकरण : रविबारे उच्च अदालत पाटनको यस्तो आदेश
हेटौँडा, ३० असोज । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतको...
काठमाडौँ, १ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरिएको ‘रणनीतिक साझेदारी’ कुनै सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन नभएको,...
काठमाडौं, १ कात्तिक । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी भएसँगै अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी कुल आचार्यले...
छोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोज्ने बाबु पक्राउ
गुल्मी, ३० असोज । आफ्नै १३ बर्षीया छोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको आरोपमा बाबु पक्राउ परेका छन् । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका...
दिउँसो सामान्य विवाद, राति विभत्स हत्या
सिन्धुपाल्चोक, १ कात्तिक । सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–५ गुन्सामा गए राति एक युवकको विभत्स हत्या गरिएको...
काठमाडौं, १ कात्तिक । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सम्मेलनको मतगणना प्रक्रियामा पनि तनाव देखिएको छ । यसअघि सम्मेलनको...
काठमाडौँ, १ कात्तिक । गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी भएका छन् । कुल आचार्यलाई पछि पार्दै पन्त एनआरएनएको...
काठमाडौँ, १ कात्तिक । अन्ततः गर्मागर्मीकाबीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मतगणना सकिएको छ । निर्वाचन समितिका प्रवक्ता...